महिलाहरुलाई कुन समयमा से’क्स गर्न बढी चाहना हुन्छ ? विस्तृत विवरणसहित – Jagaran Nepal
महिलाहरुलाई कुन समयमा से’क्स गर्न बढी चाहना हुन्छ ? विस्तृत विवरणसहित
Jagaran Nepal शुक्रबार, आश्विन ०८, २०७८
काठमाडौं । सबै प्राणीलाई से’क्स आवश्यक पर्छ । अरु प्राणीको तुलनामा मानिसहरुलाई अझ बढी से’क्सको आवश्यक पर्ने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउने गरेको छ । मानिसहरु मध्ये यहाँ उल्लेख गर्ने लागिएको विषय हो– महिलाहरुलाई कुन समय वा बेलामा से’क्सकोचाहना बढी र इ’च्छुक हुन्छन् ? : जर्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनले गरेको एक अध्ययनकाअनुसार महिनावारी भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलाहरुलाई से’क्सको चाहना बढी हुन्छ । यो अवधिमा महिलालाई सह’वासमा बढी आनन्द आउँछ।
बेम्बर्गनका अनुसन्धाताहरू एक हजार युवतीमा गरेको सर्वेक्षणपछि उक्त निष्कर्षमा पुगेका हुन्। सहभागी महिलासँग कुन समय यौ’नसम्बन्ध राख्दा बढी आनन्द अनुभूति हुन्छ भन्ने प्रश्न गरिएको थियो । यौ’न विशेषज्ञहरूका अनुसार महि’नावारी पूरा भएको पाँचदेखि सात दिनसम्म यौ’नको ‘मु’ड’ बढी हुन्छ।महिनावारी पूरा भएपछि यौ’नका लागि उत्तेजित गर्ने हार्मोन सक्रिय हुन्छ । अनुसन्धाताहरूले यस अवधिमा युवतीहरूको मस्तिष्कको तरंगको गरेको अध्ययनमा पनि महिनावारीपछिको तीन दिनमा हुने स’हवा’स’ले बढी रमाइलो अनुभूति दिने देखियो ।
त्यो सर्वेक्षणमा युवतीहरूले महिनावारीपछिका तीन दिन पूर्ण यौ’नानन्दको चाहना राख्ने गरेको बताए। र्मनीको युनिभर्सिटी अफ बेम्बर्गनले गरेको एक अध्ययनकाअनुसार महिनावारी भएको पाँचौंदेखि सातौं दिनसम्म महिलाहरुलाई से’क्सको चाहना बढी हुन्छ ।